Madaxda caalamka intooda badan iyo xoghaynta QM oo tacsi ka diray geerida halyey Nelson Mandela – Radio Daljir
Madaxda caalamka intooda badan iyo xoghaynta QM oo tacsi ka diray geerida halyey Nelson Mandela
Diseembar 6, 2013 4:21 b 0
Paris, December 6, 2013 – Madaxweynihii ugu horeyey ee madow ah ee dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela ayaa xalay geeryooday isagoo jiray 95 sano, geerida Mandela waxaa shaaciyey madaxweynaha Koonfur Afrika Jocob Zuma.
Nelson Mandela ayaa waxaa la soo dersay xanuun dhanka sanbabada ah, kaas oo la jiifay mudo dheer.
Mandela waxaa uu ahaa hugaamiyihii gobonimo doonka ee koonfur afrika, sidoo kale waxuu ahaa xubin sare oo u halgamay nidaamkii midab kala sooca ee Koonfur Afrika.
Mandela wuxuu xirnaa 27 sano, sidoo kale wuxuu ku guulaystay bilada Nobel Peace Prize sanadkii 1993-kii, wuxuu ahaa halgamaa si wayn looga xuso qaarada Afrika.
War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri.
?Geerida geesiga Afrika, Mandela oo ahaa nabaddoon waa laga wada xusayaa qaaradda Afrika, wuxuu hormuud u ahaa dhammaan inta u doodda caddaaladda iyo xornimada? ayuu yiri madaxweynaha dalka Xasan sheikh Maxamuud.
Xoghayaha guud ee Qaramada midoobey Bank moon, madaxweynaha Maraykanka Brack Obama iyo madax sar sare oo caalamka ah ayaa tacsi u diray eheledii iyo guud ahaan qaarada Afrika oo uu ka geeryooday Nelson Mandela.
Madaxweynaha Puntland oo Itoobiya kaga qayb-galaya xuska maalinta qowmiyadaha (Dhegeyso)